आन्तरिक उत्पादनकै हाराहारीमा अझै पनि भारतबाट विद्युत आयात, मा. तामाकोशी अन्योलमै| Corporate Nepal
Wednesday, September 23, 2020 | बुधबार ०७ आश्विन, २०७७
आन्तरिक उत्पादनकै हाराहारीमा अझै पनि भारतबाट विद्युत आयात, मा. तामाकोशी अन्योलमै
फागुन १, २०७६ बिहिबार १७:१८
काठमाडौं । विद्युत उत्पादन थपिने क्रम जारी रहे पनि भारतबाट आयात हुने विद्युतमा भने कमी आउन सकेको छैन् ।
विद्युत प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रको बुधबारको विवरणअनुसार आन्तरिक उत्पादन ६९१ (प्राधिकरणका आयोजनाबाट ४५२ र निजी क्षेत्रबाट २३९) मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा भारतबाट ५६१ मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ । भारततर्फ निर्यात हुने गरेको विद्युत यतिबेला शुन्य छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले यतिबेला नदीहरुमा पानीको बहाव निकै कम हुने बेला भएकोले न्यून क्षमतामा मात्रै विद्युत उत्पादन हुने भएकाले आयात उच्च हुनु स्वाभाविक भएको तर्क गरे । उनले भने– फागुनपछि मात्रै हिउँ पग्लिन थाल्छ । त्यसपछि मात्रै उत्पादन बढ्न थाल्छ । यति बेला त क्षमताको एक तिहाई मात्रै उत्पादन हुने बेला हो ।
अधिकारीले यो बर्ष जम्मा ८०–९० मेगावाट विद्युत थप भएको भन्दै यति थपिनुलाई धेरै भन्न नमिल्ने बताए । अहिले कुल आन्तरिक उत्पादन क्षमता एक हजार २७५ मेगावाट पुगेको छ । एउटा मात्रै रहेको जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानीले सुख्खा यामको माग पूर्ति गर्नसक्ने अवस्था छैन् भने बहुप्रतिक्षित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना कहिले निर्माण सम्पन्न हुने हो ? अन्योलमै रहेको छ ।
यो आयोजनाको निर्माण अवधि र लागत अस्वाभाविकरुपमा बढ्दै गएको छ । माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि पटक पटक सार्दै आएको प्राधिकरणलाई यस आयोजनाको बढ्दो लागत र समय टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ ।
पाँच दिनकै बीचमा ३४ लाख २० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन हुँदै, कुन कम्पनीमा कति भर्ने ?
केही समयभित्रै ब्रोकर कमिसन घट्छः सेबोन अध्यक्ष ढुंगाना
सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ७ सय रुपियाँ घट्यो, यस्तो छ बजार भाउ
युनाइटेड इदी–मर्दीको आईपीओ आजदेखि खुला, कति कित्ता भर्ने ?
सानिमा जनरलले ३० करोड रुपियाँको आईपीओ जारी गर्ने, बोर्डबाट पायो स्वीकृति
एनएमबि बैंकको ४९ लाख ६७ हजार कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
बागमती प्रदेशले ३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउने
उपत्यकाका ६६७ सहित ११७२ जना कोरोना संक्रमित थपिए, ७ जनाको मृत्यु